Madaxweyne Dani oo kulamo ka wadda Boosaaso – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 3 April 2019
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa qasriga Madaxtooyada Boosaaso kulan kula qaatay Haweenka gobolka Bari, gaar ahaan kuwa Boosaaso.
Kulankan uu Madaxweynuhu la qaatay Haweenka ayaa waxaa qayb ka ahaa maamulka gobolka Bari, kan Degmada Boosaaso, masuuliyiin ka tirsan Golaha xukuumadda Puntland, Taliyaha Ciidanka Booliska Puntland, Taliyaha Qaybta gobolka Bari iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland.
Maryan Maxamed Xasan guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Bari ayaa kawar bixisay qodobada muhiim ka ah ee kulanka looga hadlay.
“Shirkan uu iclaamiyey Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni waxaa uu ku saabsanaa ururada bulshada, khaasatan ururada haweenka, waxaa laga tashaday dalka wixii horumarintiisa ah, waxaa laga wada hadlay amniga iyo sidii loo dar-dargelin lahaa, sidii kulamo looyeelan lahaa, sidii la isaga kaashan lahaa wixii dhib ah oo jira
“Waa kulamadii ugu horeeyey uu Madaxweynuhu la qaato ururada bulshada, aad iyo aad baan u tix-gelinaynaa wixii dalka lagu horumarinaayo, khaasatan gobolka Bari, macluumaad fiican baa kasoo baxay, anagana diyaar baanu u nahay Alle idankiis wixii dantu ku jirto inaan kala shaqayno Dowladda”.
Kulankii Golaha Shacabka oo furmay